I-Web 2.0, Ividiyo | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 6, i-2007 Douglas Karr
Lokhu kuthunyelwe ku- I-Problogger futhi kumnandi ngokuphelele.
Uma ungayiboni ividiyo, ungavakashela isiza: I-KSU, i-Digital Ethnography
Ngiyaxolisa Careerbuilder! IFilm ithwala amaSuper Bowl Commercials
Feb 6, 2007 ngo-11: 31 PM
Wow, lena incazelo enhle kakhulu yevidiyo yeWeb 2.0. Wenze kahle kakhulu, profesa!
Kwenzeka lokhu nje mina ithunyelwe "incazelo" yami yeWebhu 2.0 namuhla (ngaphambi kokuba ngibone le vidiyo). Ngiyavuma impela ukuthi iWebhu 2.0 imayelana nokuxhuma abantu, kepha kudlula lokho. Kungukubusa ngentando yeningi kwe-Intanethi.